トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukumisela iivenkile ezigqwesileyo pa onendawo iziganeko
Loluphi uhlobo shop pa okanye isincomo ukwenza lo mcimbi, siya kujonga ukuba pick it apho uzimisele.
■ isiganeko ngenyanga enye uphawu
Kuqala kwinto zonke, kuba elibe pa, ayeba isiganeko uphawu kanye ngenyanga. Xa pa parlour nokuya kuni, zama ukuqinisekisa ukuba babambelele isiganeko uphawu.
ngokuba suku kwenziwe isiganeko umqondiso, Dattari Open Umhla ngenxa iivenkile, kuba imini idla zinentsingiselo ekhethekileyo, mababulawe into sizathu, oko uzama Khonza nokuhlawulwa kukho.
Ngamanye amaxesha, umhla we ekupheleni kosuku olunye, kodwa kukho elibe pa ukuba athi zonke iziganeko ibhilibhodi, loo ivenkile pa, ibhola ngaphandle, kuba kulula kwaye saa ngomhla, kwindawo ethile kwakhona kwemini kuba kukho kungenzeka ukuba ibonelelwa.
Noko ke, ukuba ngenyanga kuqala, kuba oko Khonza ingqalelo, kukuba kukutyundyutha ibhola ngaphandle kwe zegumbi pa, ezifana ngokubeka elikhulu ngaphambili.
Noko ke, wayesathetha umcimbi oluthi, kuba inkulu pa parlour ukuba uyabaleka ekufumaneni inzuzo, usafuna kufuneka uqinisekise ukuba yonke imvakalelo imali ngala wam amehlo. Okanye, Uqinisekile ukuba ufuna ukusebenzisa iinkonzo ezifana site data Unikimbie Seven.
■ umahluko ixesha phakathi kwesiganeko evulekileyo
ngokuqhelekileyo, kodwa yintoni ushiywa kususela kusasa, ukuze-15 ngentsimbi wavula kunye nentsimbi 19 evulekileyo, kukho iziganeko ukunciphisa ixesha nokusebenza. Ukuba ixesha ukubaleka liyalambatha, kusenokubonakala ngathi akukho recovery, eneneni va a vice versa. Kwi pa lokuphumula, kodwa maxa wambi nayo yenziwa imifanekiso ezithandwayo, isiseko liya kubamba kakuhle isiganeko eso imifuziselo ofuna ukwandisa ukusebenza. It ufuna ukwandisa
nokubaleka, oko kuya kuba into yokuba ufuna ukushiya bahle. Njengoko ngokunjalo shop imifanekiso ezithandwayo, esi siganeko kudla kwenziwa imifuziselo ezinjalo ofuna ukuyisebenzisa elide.
ngokuqhelekileyo, nkqu uhlobo kakhulu uReeva uhlengahlengiso isikhonkwane, loo nto kangako ukubeka iseti, xa umahluko ixesha phakathi iziganeko ezivulekileyo, sivame ngcono kunesiqhelo. Ngenxa yeso sizathu, pa ivenkile leyo nayo izihlandlo eziliqela kwenziwa ngenyanga ixesha umahluko phakathi kwesiganeko evulekileyo, iya kuthunyelwa ukuncoma.
Noko ke, xa oku ngokucacileyo okanye imifuziselo kuthandwe, ngoko unika kukho kwakhona into yokuba "Wena mhlawumbi kubuyisela nje kancinci phambi kokuba ukususwa ...", oko ngeenxa apha, Ya shop-nkqubo zoshishino ukusuka yesiqhelo kube kukho imfuneko ukuphanda ngokuba inokuthenjwa.
■ xa kuthe
umva, ezifana grounder zidibene, isiganeko ezifana loo umdlalo grounder igama imodeli kunye nomhla, zama ukuqaphela ukuba xa ephezulu amathuba iziganeko Gase kutsala abathengi njongo.
ezi ibali trend kuphela, oko awusebenzi bonke. Ekubeni shop ukukhetha kuya kuchaphazela kakhulu pa wosindiso okanye boyisiwe, kufuneka ukuphanda iimpawu kunye izimo nabahleli ye elibe pa ukusuka yesiqhelo kwakhona anzima. Nakuba kunjalo, ukuba ufake olu hlobo umlinganiselo entloko, libali ..., ukuba kubonakale izinto ayibonakali kude kube ngoku. Iziganeko ezifana naleyo, zama ukuqaphela ukuba xa ephezulu amathuba iziganeko Gase kutsala abathengi njongo.
ezi ibali trend kuphela, oko awusebenzi bonke. Ekubeni shop ukukhetha kuya kuchaphazela kakhulu pa wosindiso okanye boyisiwe, kufuneka ukuphanda iimpawu kunye izimo nabahleli ye elibe pa ukusuka yesiqhelo kwakhona anzima. Nakuba kunjalo, ukuba ufake olu hlobo umlinganiselo entloko, libali ..., ukuba kubonakale izinto ayibonakali kude kube ngoku.